बारम्बार तिर्खा लाग्नुले गम्भीर बिरामी हुन सक्छ, बेवास्ता नगर्नुहोस् – Democracy Nepal
25 seconds ago Hom Prasad Acharya
पानीले हाम्रो जीवनलाई सन्तुलित बनाउँछ तर यदि यसको परिमाण शरीरमा असंतुलित भयो भने यसले जीवनलाई संकट खडा गर्न सक्छ। शरीरको भित्री प्रणालीले तिर्खा अनुसार पानीको आवश्यक्ता पुर्‍याउँछ।
यद्यपि धेरै चोटि कोही मानिसहरू अत्यधिक तिर्खा महसुस गर्छन् वा उनीहरू अत्यधिक र धेरै पानी पिउन थाल्छन्। वास्तवमा, अधिक तिर्खा महसुस गर्ने अवस्था गम्भीर रोगको संकेत हुन सक्छ।
धेरै चिकित्सा अनुसन्धानले भनेको छ कि स्वस्थ व्यक्तिको लागि प्रतिदिन औसत २ देखि ३ लिटर पिउने पानी पर्याप्त हुन्छ । पानीको आवश्यकताको यो मात्रा केही सर्तहरूमा कम वा बढ्न सक्छ ।
जब हाम्रो शरीरले अधिक परिश्रम गर्दछ वा हामी एक उच्च स्थानमा हुन्छौं वा अत्यधिक तातो तापक्रम रहेको अवस्थामा हामी सामान्य भन्दा बढी पानीको आवश्यकता महसुस गर्दछौं। तर कहिलेकाँही केही बिरामीहरूमा, मानिसहरूलाई तिर्खा लाग्छ वा फेरि उनीहरूले अधिक पानी पिउन थाल्छन् । यो बुझ्नु महत्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई किन तिर्खा लाग्छ र यो कुन रोगको संकेत हो:
यी हुन् अत्याधिक तिर्खाका कारणहरू :
चिकित्सा सर्तमा, अत्याधिक तिर्खाको अवस्थालाई ‘पोलिडिप्सिया’ भनिन्छ। यस अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले अधिक पानी पिउँछ, जुन अवस्थामा शरीरमा सोडियमको कमी हुन सक्छ।
वाकवाक वा बान्ता जस्तो लक्षण पनि देखा पर्न सक्छ। यस बाहेक तपाईले धेरै पिसाब गर्ने समस्याको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर त्यहाँ केहि रोगहरू छन् जसमा पोलिडिप्सिया अर्थात् अत्याधिक तिर्खा प्रमुख लक्षण हो।
आजकल यो प्रत्येक उमेर समूहमा सामान्य प्रचलित रोग भएको छ। यो रोग कसैलाई खराब जीवनशैली वा आनुवंशिक कारणले हुन सक्छ । दोहोरिने तिर्खा यसको पहिचानको प्रमुख विशेषता हो।
यस जीवनशैली सम्बन्धित रोगमा, रगतमा चिनीको मात्रा बढ्छ, जसले मिर्गौलाले सजिलैसँग फिल्टर गर्न सक्दैन। यो चिनी पिसाबको साथ बाहिर आउँछ, जसको कारणले शरीरमा पानीको अभाव हुन्छ। यो बारम्बार तिर्खाको कारण हो ।
यसका लागि जाँच गर्न आवश्यक छ । यी लक्षणहरू शरीरमा देखिएमा चाँडै तपाइँले मधुमेहसम्बन्धी जाँच गर्नुहोस् ।
यसको सीधा अर्थ शरीरमा पानीको कमी हुनु हो । खाना विषाक्तता, पखाला, संक्रमण, ज्वरो वा जलेको मुख्य कारणहरू हुन् । बारम्बार तिर्खा, सुख्खा मुख, थकान, बान्ता, वाकवाकी र बेहोस हुनु यसको लक्षणहरू हुन्। डिहाइड्रसनको बिरामीलाई ठीक पानी र आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स दिएर निको हुन सक्छ । तर कहिलेकाहीं लापरवाहीमा यसले मृत्युलाई पनि निम्त्याउन सक्छ।
सामान्य अर्थमा, मुटुको धडकन बढ्ने, बेचैनी र घबराहटको भावनालाई चिकित्सा चिन्ता भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा, मुख पनि सुखा हुन्छ, जसको कारणले व्यक्तिले अधिक पानी पिउँछ। यस्तो अवस्थामा, केही एन्जाइमहरूले पनि मुखमा बनेको र्‍यालको मात्रा कम गर्दछ, जसको कारण बढी तिर्खा लाग्न सक्छ।
जब यी लक्षणहरू देखा पर्न थाल्छन्, तब बुझ्नुहोस् शरीरमा पानीको अभाव छ!
धेरै पटक चिल्लो वा मसलादार खाना खाएपछि शरीरले सजिलै पचाउँन सक्दैन । शरीरलाई प्रशस्त खाना पचाउन अझ बढी पानी चाहिन्छ। यसले शरीरमा पानीको अभाव गराउँछ र अत्यधिक तिर्खाको कारण हुन सक्छ।
अत्याधिक पसिना विशेष गरी तातो र आर्द्र मौसममा देखा पर्दछ। तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्न हाम्रो शरीरले धेरै पानीको माग गर्दछ। यसका कारण पनि हामीलाई अधिक तिर्खा महसुस हुन्छ ।
अत्यधिक तिर्खाको नोक्सानबाट बच्न हामीले सर्वप्रथम तिर्खालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्दछ । एकै पटकमा धेरै पानी पिउनु हुँदैन ।
घरेलु उपचार पनि प्रभावकारी हुन सक्छ। उदाहरणको लागि, अमलाको धुलो र महको मिश्रण गरी खाने वा चिरा सौंफ खाँदा पनि कृत्रिम तिर्खा कम गर्न सकिन्छ।
एक चम्चा कालो मरिज धुलो चार कप पानीमा उमालेर पिउँदा पनि तत्कालको तिर्खालाई मेटाउन सकिन्छ । यसले तपाईंलाई राहत दिनेछ । तिर्खाको अधिक समस्या भएमा चिकित्सकसँग सम्पर्क गरी सल्लाह लिनु पर्छ।
Previous घुससहित विद्युत प्राधिकरणका चार कर्मचारी पक्राउ
शिक्षकद्वारा कक्षाकोठामै छात्रालाई अश्लिल दुर्व्यवहार
घुससहित विद्युत प्राधिकरणका चार कर्मचारी पक्राउ
दल चुनावी घरदैलोमा लागिसके’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चमा लगातार १३ दिन बहस, कहिले टुंगिएला ?
25 mins ago Hom Prasad Acharya
39 mins ago Hom Prasad Acharya
51 mins ago Hom Prasad Acharya
58 mins ago Hom Prasad Acharya
27 seconds ago Hom Prasad Acharya